တရုတ် စိတ်ကြိုက် ဆောင်းရာသီ နွေးထွေးသော မိန်းကလေး အမျိုးသမီးများ သိုးသားအရေပြား ဘွတ်ဖိနပ် ထုတ်လုပ်သူများ |JNP
* 100% မျက်နှာနှစ်ထပ် သြစတြေးလျသိုးသားအမွေး
* မချော်နိုင်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော အပြင်ဖိနပ်
၎င်းသည် မျက်နှာနှစ်ထပ်ရေစိုခံ သြစတြေးလျသိုးသားရေဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဂန္တဝင် Bailey Button နှင်းဖိနပ်ဖြစ်သည်။စတိုင်ကျပြီး လှပတဲ့ ဒီဘွတ်ဖိနပ်တွေက သင့်ကို ဒီဆောင်းရာသီမှာ အေးမြစေပါလိမ့်မယ်။ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောခလုတ်အလှဆင်၊ boot သည်ခြေသလုံးကြွက်သားကိုကာကွယ်နိုင်သည်၊ ခြေကျင်းဝတ်အထိလှိမ့်နိုင်သည်၊ နှစ်ထပ်ဝတ်၊ နှစ်ထပ်ဖက်ရှင်။ပျော့ပျောင်းသော ကူရှင်တစ်ဦးတည်းသော ယူနစ်သည် အထောက်အပံ့နှင့် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး တာရှည်ခံရာဘာ အပြင်ဖိနပ်သည် ကြာရှည်စွာ ဆုပ်ကိုင်မှုနှင့် ဆွဲငင်အားကို ပေးစွမ်းသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရောင်အတိုင်း ဤတစ်မျိုးကို အလွန်နှစ်သက်သည်။ဟုတ်ကဲ့၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် အရောင်တွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်အရောင်ကို သေချာပေါက် ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းတွင်းဖိနပ်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဘွတ်ဖိနပ်ရှည်များ၊ ခြေကျင်းဝတ်ဘွတ်ဖိနပ်များ၊ ဘွတ်ဖိနပ်များ၊ sequins နှင့် prints များရှိသည်။သင်သည်လည်း၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းစတိုင်ရှိနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ စိတ်ကြိုက်, ငါတို့တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပြီး သုံးစွဲသူများစွာအတွက် ၎င်းတို့၏ စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကို ပြီးမြောက်စေပါသည်။ရင့်ကျက်သောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရဲရင့်သောရွေးချယ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခွန်အားကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်ဟု သင်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
1. လိုဂိုကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ- အပေါ်ပိုင်း၊ Insole၊ Outsole
2. စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများ- Sheepskin၊ Cow Suede၊ Suede၊ Glitter စသည်တို့
4. စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား- မတူညီသောအရွယ်အစားများ၊ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်
5. စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှု- ဖိနပ်သေတ္တာ၊ poly အိတ်စသည်ဖြင့်၊ ထုပ်ပိုးမှုအတွက် လိုဂိုကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက်အကြံဥာဏ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ သို့မဟုတ် Amanda@jnpfootwear.com သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။
Q1: မှန်ကန်တဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
သင့်ပစ္စည်းများနှင့် ပစ်မှတ်စျေးနှုန်းကို အတည်ပြုရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးပါမည်။
Q2: မင်းရဲ့ moQ ကဘာလဲ။
ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်, moQ ကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည်, အသေးစိတ်အချက်များကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီတွင် ပြီးပြည့်စုံသော သိပ္ပံနည်းကျ အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရှိသည်။ထုတ်ကုန်တိုင်း၏ မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံပါသည်။
ယခင်- Classic Real Sheepskin Ankle နှင်းဖိနပ်
နောက်တစ်ခု: ဆောင်းရာသီအနွေးထည်အမျိုးသမီး Shearling Scuff ဖိနပ်
အမျိုးသမီးများ အနက်ရောင် Bling Bling Ankle နှင်းဖိနပ်
အမျိုးသမီးများ နွေးထွေးနူးညံ့သော ဆောင်းရာသီ Pom Pom Indoor ဘွတ်ဖိနပ်
အမျိုးသမီးများ သိုးသားရေအစစ် ဆောင်းရာသီ နှင်းဖိနပ်
Classic Men Casual Outdoor Real Sheepskin ဘွတ်ဖိနပ်
ဆောင်းရာသီ ချစ်စရာ နွေးနွေး Indoor ခြေကျင်းဝတ် အမျိုးသမီးများ
အမျိုးသားများအတွက် ဆောင်းရာသီ အနွေးဖိနပ် အစစ်အမှန် သိုးသားမွေးဖိနပ်...